सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ! सावधान, पढेर सक्दो शेयर गरौं – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ! सावधान, पढेर सक्दो शेयर गरौं
ICT Khabar/आइसिटी खबर March 22, 2019	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, आइसिटी रिपोर्ट, शिक्षा/चेतना, समाज खबर Leaveacomment 356 Views
काठमाडौँ : के तपाइँ सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउने बानि छ ..? एदी छ भने आजै कम गर्नुहोस कृपया पुरा पढी जनचेतनाको लागि आफ्ना साथि आफन्तजन लाइ सेयर गर्नुहोला ! आजभोली हामि मोबाइल को पर्योग धेरै नै गर्छौ चाहे सुत्ने बेला होस् या अरु बेला मोबाइल हामि धेरै नै पर्योग गर्छौ तर मोबाइल धेरै पर्योग गर्नु स्वास्थ्य को लागि र आखाको लागि एकदमै नराम्रो हो ! मोबाइल एउटा अति आवस्यक चिज हो तर एसको सदुपर्योग गर्न जनिएन भने हाम्रो स्वास्थ्य लाइ असर गरिरहेको हुन्छ
दिनमा त ठिकै छ तर राती सुत्नु भन्दा पहिले कम्तीमा पनि एक घण्टा अघि मोबाईलाई आफूबाट टाढा राख्नुपर्छ । यदि यसो गरेनौ भने हामीमा केहि समस्याहरु निम्तीन सक्छन् ।सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु मानिसक स्वास्थ्यका लागि धेरै हानिकारक हुने तथ्य बाहिरिएको छ । करिब १ लाख मानिसहरुमा गरिएको सर्वेक्षणपछि उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
तौल बढ्ने :
समस्या समाधानमा कठीन :
सुत्ने बेला मोबाईल फोनको प्रयोग गर्नाले दिमागलाई धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ । जसका कारण मेमोरी लसको समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ । आँखामा प्रेशर :
ध्यान दिन नसक्नु:
Previous ‘हेडफोन’ लगाएर सुतेका विद्यार्थी विहान उठ्दा कान नसुन्ने भएपछि
Next अब रोबोटले दिनेछ पहरा, अवैध गतिविधिका साथै अन्य सूचना पनि दिन्छ